यसरी हटाउन सकिन्छ गर्भवती अवस्थामा पेटमा कोरिएको दाग
scheduleशनिवार श्रावण ३२ गते, २०७६
एजेन्सी, ३० असार । गर्भवती अवस्थामा महिलाहरुको छाला निकै सेन्सेटिभ भएका हुन्छन् । त्यहाँ हातले कन्याए अथवा च्यापिएमा पनि छाला च्यातिएर दाग बस्न सक्छ ।
बच्चा पाइसकेपछि पनि छालामा बसेको उक्त दाग लामो समयसम्म जाँदैन । यसले गर्दा महिलाहरुको सौन्दर्यमा असर पु¥याउन सक्छ । त्यसैले यस्ता दाग हटाउनका केही उपायहरु अपनाउन सकिने अध्ययनले जनाएको छ ।
चिनी: २ चम्चा चिनीमा बदामको तेल र कागतीको जुस मिसाएर घोल्ने । उक्त घोललाई दाग भएको छालामा लेप्ने । १० मिनेटसम्म दाग वरिपरि मसाग गर्ने र पखाल्ने । एक महिनासम्म यो विधि अपनाउनेले छाला च्यातिएर भएको दाग हटाउन सकिन्छ ।
आलु: तरकारीको राजा आलुमा प्रशस्त खनीज पदार्थ र भिटामिन पाइन्छ । यसमा भएको भिटामिन ई र के ले छालाका कोषहरूको वृद्धिविकास तथा छालामा भएको दागधब्बालाई समेत निको पार्नसक्छ । त्यसैले आलुलाई काटेर दागमा दल्ने । आलुको रस सुकिसकेपछि मनतातो पानीले पखाल्ने । दाग नहराउञ्जेल नियमित यो विधि अपनाउन सकिन्छ ।
सुपारी: सुपारीमा प्रशस्त भिटामिन ई पाइन्छ । यसले क्षय भएका शरीरका कोषहरूलाई पुनर्जिवीत गराउने काम गर्छ । त्यसैले सुपारीलाई १ घण्टासम्म भिजाएर खस्रो सतहमा घोट्ने । बाक्लो लेप बनाएर शरीरका कुनै पनि दाग भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ ।
राति यसको लेप लगाएर विहान उठेर पखाल्दा उचित हुन्छ ।
अण्डाको सेतो भाग: उसिनेको वा काँचै अण्डाको रानिलाई छुट्याएर बाहिरको सेतो भागको पेस्ट बनाएर नियमित दाग बसेको छालामा लगाउनाले दाग बिस्तारै हट्दै जान्छ ।
घिउकुमारी: घिउकुमारीको एउटै विशेष गुण भनेको यसको जलनविरोधकता हो । यसले छालामा भएको जलन, घाउ, चोटपटक लगायत दाग र धब्बालाई समेत निको पार्दछ । त्यसैले दैनिक घिउकुमारीको एउटा डाँठ चपाउनुपर्छ । त्यस्तै च्यात्तिएको छालालाई निको पार्नको लागि दिनहुँ दागमा घिउकुमारीको जेल लगाउने र १०/१५ मिनेटपश्चात मनतातो पानीले पखाल्नु पर्छ ।
नयाँ घरबारे सोच्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् १२ मन बहलाउने घरहरु
आफ्नी प्रेमिकाको माया साँचो कि झुठो, यसरी जाँच्नुस्
सावधान ! रातको समय धेरै खाने गर्नुभएको त छैन नि !
यी हुन् मृत्युका संकेत दिने सपना
कुनबार जन्मेका मान्छे कस्ता हुन्छन् ? आफैसँग दाँज्नुहाेस्
असफलताबाट निराश हुनुहुन्छ, यो पढ्नुहोस्
हिंडाइमा लुकेका यी ६ रहस्य थाहा पाउनुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ नमस्तेको अर्थ !
बच्चाको अगाडि कहिल्यै नगर्नुहोस् यस्ता गल्तीहरु
यी हुन् गर्ल्स होस्टल भित्रका १० रहस्य, फूल मस्ती र फेसनको ‘मकटेल’ !
यी दश सपना जुन तपाईका लागि शुभ संकेत हुन्
कपाल फूलेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यी ५ चीज खानुहोस्
रातभर सुत्न जरुरी छैन, ४० मिनेटमै पुर्‍याउनुहोस् निन्द्रा
यो हो मुख धुने सहि तरिका
हरेक दिन बिहान एक गिलास मनतातो पानी पिउनुहोस्, यस्ता छन् फाइदैफाइदा
स्वामी विवेकानन्दका यी १० वाणी जसले तपाईंको जीवन बदल्न सक्छ
अचानक धनी हुँदा मानिसले गर्ने १४ काम, पढेर तपाईं अचम्भित हुनुहुनेछ !
जीवन शैली, समाचार, स्वास्थ्य
छोराछोरी पर्याप्त सु्त्छन् ? मानसिक समस्याको खतराबाट बच्नुहोस्
स्वीडेनका सांसदको सुविधाः नेपालले केही सिक्ने कि ?
खेलकुद, जीवन शैली, समाचार
मेस्सी भन्छन्- परिवारसँग बस्दा हारको पीडा भुल्न सजिलो हुन्छ
वर्षात्को मौसममा घरमा ओसको मात्रा बढ्ने गर्छ, त्यसैले पनि यो कक्रोच (साङ्ग्ला)का लागि निकै अनुकुल मौसम हो । किचन र स्टोररुममा...
समाजवादी पार्टीमा विभागीय जिम्मेवारी टुंगियो (नामावलीसहित)
काठमाडौं, ३१ साउन । समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी...
पत्रकार शालिकरामको भिडियोबारे पत्रकार श्रेष्ठको स्पष्टीकरण
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान सुस्त देखिएजस्तो लागेपछि माउन्टेन टिभीका सम्वादददाता...
रविमाथि छानबिनको माग गर्दै पुडासैनीको पक्षमा नाराबाजी
चितवन, ३२ साउन । चितवनमा एकाबिहानै माउन्टेन टिभिका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई न्यायको माग गर्दै नाराबाजी भएको छ । पुडासैनीको...
सम्भोगमा २ मिनेटमै अधिकांश पुरुषको खेल खतम !
एजेन्सी । सम्भोगसम्बन्धी एउटा यस्तो तथ्य बाहिर आएको छ जसलाई न पुरुषले मन पराउँछन् न महिलाले । तर एक नयाँ अध्ययनका अनुसार ४५...
काठमाडौं, ३१ साउन । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेका समर्थकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ढुंगामुढा गरेका...
पाँचथर, ३१ साउन । कुम्मायक गाउँपालिका–१ पेनधारास्थित एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमती र सासूमाथि खुकुरी प्रहार गरेका छन्। झापा...
केरा खानुहुन्छ ? जानीराख्नुहोस् केराबारे यी २० रोचक तथ्यहरु
केरा हामीले चिनेको र जानेको फलफूल हो । हामी प्रायः केरा खाइरहेका हुन्छौं । तर केराबारे यी २० रोचक यथार्थ जानेपछि यो तपाईलाई...